राजा त्रिभुवनले यस कारण जलाएका थिए १० हजारको नोट - Naya Pageराजा त्रिभुवनले यस कारण जलाएका थिए १० हजारको नोट - Naya Page
राजा त्रिभुवनले यस कारण जलाएका थिए १० हजारको नोट
राजाले कतिपय औपचारिक समारोहमा जाँदा जंगी पोशाक लगाएर जानुपथ्र्यो । वि.सं. १९८० मा त्रिभुवन १७ वर्षका लक्का जवान थिए । बढ्दो उमेरमा पुरानो जंगी पोशाक साँघुरो भएपछि नयाँ सिलाउन भारु ४० हजार सिंहशमशेरमार्फत श्री ३ सँग मागेछन् । उक्त पोशाक कलकत्ताको रेन्किन कम्पनीमा सिलाइन्थ्यो । चन्द्रशमशेरले निजायती अड्डाबाट एउटा नोट (भारु १० हजार मात्र) पठाएछन् ।
उक्त नोट प्रकरणमा श्री ३ चन्द्रले छोरा सिंहलाई ‘तिमीहरूको टाउको यिनैले खान्छन्’ भनेका थिए रे ! नभन्दै चन्द्रशमशेरको त्यो भनाइ सत्य भयो । त्रिभुवनले राणाहरूको नियन्त्रणमा बस्न सकस मान्दै गए । उनकै पालामा राणा शासनको अन्त्य भयो ।
जहानियाँ राणा शासनका श्री ३ भएर पनि चन्द्रशमशेरको स्वभाव अनौठो थियो, उनी बोलेर बिझउँदैनथे । उनकै पालामा सती प्रथा र दास प्रथा अन्त्य जस्ता समाजका लागि कल्याणकारी घोषणा भएका थिए ।
तर, उनीपछि श्री ३ भएका भीमशमशेरका उत्तराधिकारी जुद्धशमशेर भने मानमर्दन गर्न पारङ्गत थिए । उनी श्री ५ हरूको तेजोबध गर्न समेत पछि पर्दैनथे । मर्यादा उल्लंघनको दुस्साहस गर्ने भएकाले जुद्धशमशेरसँग राजा त्रिभुवन सकभर पन्छन खोज्थे रे !
बैठकमा दर्जा अनुसारको आसनको व्यवस्था गरिएको रहेनछ । राजाको उपस्थितिपछि जुद्धशमशेरले आफू बसिरहेको सबभन्दा अग्लो आसन छाडेर त्यसभन्दा अलि होचो सोफामा बसेछन् । उनले युवराजलाई भने आफू बसेको भन्दा होचो आसनमा बसाए रे ! सभामा उपस्थित अन्य सबैलाई भने डसना, चकला र गलैंचामा बस्ने व्यवस्था रहेछ ।
जुद्धशमशेर राजा त्रिभुवनसँग व्यवहार गर्दा झर्कने र राजनीतिक कुरा उठ्दा आफूले श्री ५ को राजनीतिक गतिविधिको सुराक पाइसकेको छनक दिन खोज्थे । सोही क्रममा उनले पूर्णरूपमा मर्यादा पालन नगर्ने दुस्साहस गर्न थालेछन् ।
हिमाल खबर पत्रिकाबाट